Midowga Yurub Oo Sheegay In Ay Qaban Doonaan Shir Looga Hadlayo Dib U Dhiska Somaliya, | Salaan Media
Midowga Yurub Oo Sheegay In Ay Qaban Doonaan Shir Looga Hadlayo Dib U Dhiska Somaliya,
July 16,2013 Brussels (SM) Midowga Yurub ayaa maanta ka hadlay shir la qorsheynayo in looga hadlo dib u dhiska Soomaaliya,kaasi oo ka dhaci doona magaalada Brussels ee xarunta dalka Belgium.
Catherin Ashton oo ah Madaxa arimaha dibadda iyo siyaasadda ee ururka Midowga Afrika ayaa sheegtay in shir u gaar ah Soomaaliya uu ka dhici doono magaalada Brussels ee dalka Belgium,waxaana looga hadlayaa dib u dhiska dalka Soomaaliya.
Ashton oo warbaahinta kula hadlaysay xarunta Midowga Yurub ayaa sidoo kale sheegtay in shirkan ay ka soo qeybgali doonaan madaxa midowga Yurub, dalalka Midowga Yurub ku jira oo 27 dal ah iyo ururo kale oo caalami ah,iyadoo shirkan uusan noqondoonin kii ugu dambeeyey ee loo qabta Soomaaliya.
“Shirka bisha September ee sanadkan 2013 xarunta Midowga Yurub ka dhici doona waa mid u gaar ah Soomaaliya, waxaana kasoo qaybgeli doona dalalka kaalmooyinka siiya Soomaaliya si ay uga qaybqaataan dib u dhiska dalka ay dagaaladu la dageen,” ayay hadkeeda raacisay Ashton.
Shirkan uu Midowga Yurub qorsheynayo ayaa waxaa shir gudoomin doona madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo Cattherin Ashton.
Catherin Ashton ayaa ugu dambeen sheegtay in shirka lagu falanqeyndoono inta uu socdo sidii Soomaaliya looga taageeri lahaa dib u dhiska iyo in ay yeelato garsoor caddaalad ah,islamarkaana laga soo saari doono qodobo wanaagsan.